AVANI na-ekwupụta ọkwa ọhụụ ọhụụ 'AVANI +'
Home » Itylọ Ọrụ Mmepe Ọbịa » AVANI na-ekwupụta ọkwa ọhụụ ọhụụ 'AVANI +'
AVANI Hotels & Resorts nwere obi ụtọ ịkpọsa ndọtị ọhụụ, AVANI +, na mwepụta nke ụlọ nkwari akụ mbụ ya na Luang Prabang na Machị 1, 2018. Amalitere na 2011, AVANI bụ otu n'ime ụdị ngwa ngwa na-eto ngwa ngwa si Asia, na-arụ ọrụ ugbu a karịa mkpịsị ugodi 3,800 na mba 15 gafee ọtụtụ mpaghara yana jiri igodo ọhụrụ 3,000 ọzọ na pipeline. Pọtụfoliyo AVANI + ga-agụnye nhọrọ nke ụlọ oriri na nkwari akụ na ebe ntụrụndụ na-egosipụta ọkwa na-esote n'ụdị, imewe na akụrụngwa.
Onye ọ bụla AVANI + ga-akọ akụkọ nke aka ya nke mere na ndị ọbịa ga-achọpụta obere ihe, site na ije ruo imewe na ebe ọzọ. AVANI + Luang Prabang kwere nkwa ịnye ndị njem njem ahụ otu puku afọ ga-atụ anya mgbe ha gara na UNESCO World Heritage Site na Laos. Ngwakọta AVANI + a mepụtara n'otu n'otu na-aga n'ihu na-echegharị echiche iri nri na ụlọ nri pụrụ iche na ụlọ elu ma ọ bụ echiche echiche al fresco. Na mgbakwunye, AVANI + ga-ewebata ndị ọbịa ebe a ga-aga site na ahụmịhe dijitalụ nke dijitalụ maka ndị na-eme nchọpụta nke oge a, na-enye nghọta nke ndị njem banyere ọdịbendị mpaghara, ebe dị jụụ na ndụmọdụ njem banyere obodo mepere emepe na n'ọnọdụ ụfọdụ, ebe ndị na-adịghị mma.
AVANI + Luang Prabang dị na etiti Luang Prabang, ma na-esite na Mekong River, Royal Palace, na Night Night. Dị ka akụkụ nke obodo a ma ama nke dị na ọdịbendị Laotian, AVANI + na-ewelite ogwe ụlọ owuwu ọhụụ nke French nke na-agwakọta na mpaghara akụkọ ihe mere eme, yana na ime mmụọ French nke sitere n'ike mmụọ nsọ nke na-eme ka nka dị mma n'oge a. Roomslọ ndị ọbịa na 53 nke ọ bụla na-egosipụta mmekọrịta chiri anya, nke a na-emeghe na ọnụ ụzọ osisi ndị a na-akpọ French nke meghere mbara ihu ma ọ bụ mbara ala nke na-ele anya ma ọdọ mmiri ma ọ bụ ogige nkeonwe.
Alejandro Bernabé, Onye isi oche nke Operations maka AVANI Hotels & Resorts kọwara, "ụlọ nkwari akụ AVANI + ga-ebuli onwe ha elu site na ịbụ naanị ihe pụrụ iche ma ọ bụ ebe etiti obodo zuru oke." “AVANI na-elekwasị anya mgbe nile ịnye nkọwa anyị dị mkpa nye ndị ọbịa anyị na AVANI + ga-ewere nke ahụ na ọkwa ọzọ, na-enyekwu ụdị ejiji ma na-agbaso ụkpụrụ na-enweghị usoro maka echiche ụlọ nkwari akụ anyị, na-agafe karịa ịnye ụlọ ọrụ, ihe eji enyere ndụ aka, na ọrụ . Obi dị anyị ezigbo ụtọ ịmebata AVANI + site na mwepụta nke AVANI + Luang Prabang ma anyị na-atụ anya ịkpọsa ụlọ nkwari akụ ndị ọzọ AVANI + n'ọnwa ndị na-abịanụ ”ka o kwubiri.
Onye isi oche nke ụlọ ọrụ nlekọta Lufthansa nyere iwu obodo statetali
Onye isi ochichi ohuru nke ahia & ire ahia aha ya na Delta Hotels - Marriott Dallas Allen & Watters Creek Convention Center
Ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya nke Africa na-agbasawanye ASEAN-African Tourism Alliance
Ndi India tufuru ndi ndu njem njem 2 nye COVID-19